သူရမြင့်မောင်သည် ၀န်ကြီးအဆင့်အတန်းများထဲတွင်ဆင်းရဲသူဖြစ်သည်။ နောက်မိန်းမယူထားပြီး အိမ်ထောင်စုနှစ်စုပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသူဖြစ်သည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သူရမြင့်မောင်သည် ၀န်ကြီးအဆင့်အတန်းများထဲတွင်ဆင်းရဲသူဖြစ်သည်။ နောက်မိန်းမယူထားပြီး အိမ်ထောင်စုနှစ်စုပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသူဖြစ်သည်။
သူရမြင့်မောင်သည် ၀န်ကြီးအဆင့်အတန်းများထဲတွင်ဆင်းရဲသူဖြစ်သည်။ နောက်မိန်းမယူထားပြီး အိမ်ထောင်စုနှစ်စုပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသူဖြစ်သည်။
Posted by student on Mar 19, 2012 in Copy/Paste | 20 comments
အသက် ၇၀ကျော်နေပြီဖြစ်သော သာသနာရေးဝန်ကြီး သူရမြင့်မောင်သည်
ကိုယ်ကျိုးသုံးစွဲနေခြင်းကို ၄င်း၏ညီအကို စစ်ဥပဒေချုပ်ဟောင်းကြီး
သာသနာရေးဝံကျီးဆိုလို့ ဘုရားနဲ့တရားနဲ့များလားလို့.. အခုတော့ မယားနဲ့ကုလားနဲ့ ဒဲ့
ကြောင်ကြီး ပြောမှပဲ.. ဘ၀ ဘ၀ သနားစရာ တော်တော် ကောင်းပါလား။
အော်သူများပေးစားတာနဲ့ မယူချင်ဘဲ ယူရသတဲ့လား။ ထူးဆန်းတာဘဲ အသက်က ငယ်ငယ်လေးတွေ ဆိုတော့ သူငယ်ပြန်ကြတာနေမှာပေါ့။ သူတို့ ရှိပြီးသားတွေ ဘာလို့ပေးစားနေတာလဲ ။ တို့များနဲ့ ပေးစားပါတော့ လားနော်။ ဟင်း။။ ဟင်း။။။ ဟင်း။။။
သူလဲလေ လောကီသားပေမို့ သာသနာရေးဝံကြီးဆိုသော်လည်း ပုထုဇဉ်သားပေကို။ လူကြီးတော့ လောဘကြီးတတ်ကြတယ်။
If it is true, he should Withdraw from Minister Post.
ဒါမျိုးကြ ဒီကောင်က ၂ ခါမငြင်းဘူး :-)
တပ်ထဲမှာ အဲ့ဒါဆိုးတယ် … ဗိုလ်ကြီးလောက်ဖြစ်လာလျှင်ပဲ .. မိန်းမမရှိလျှင် အတင်းယူခိုင်း ၊ ဟိုလူ့အမျိုးနဲ့စပ် ဒီလူ့အမျိုးနဲ့ စပ်တော့တာပါပဲ … ။ (မယားရှိသူကိုတော့ …ထပ်ယူခိုင်းတာမျိုး .. ရှိလျှင် ရှိမှာပေါ့ .. ဒါပေမယ့် … ကျွန်မသေချာမသိပါဘူး ) … ။
စစ်တပ်ထဲက ယောကျာ်းကို ယူလိုက်ပြီဆိုလျှင် မိန်းမဖြစ်သူပါ တပ်ကိစ္စလိုက်လုပ်ရပါတယ် … ။ ရဲဘော်မိန်းမတွေက အရာရှိအိမ်မှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာမျိုးလည်းရှိပြီး … အ၀တ်လျှော်ရတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ် … တပ်ထဲမှာ ကြက်တွေ ၀က်တွေ မွေးတာမျိုး … သီးနှံပင်နဲ့မှိုတွေစိုက်တာမျိုး ၊ တပ်အားကစားလုပ်တာမျိုး ဖက်ထိပ်လုပ်တာမျိုးတွေမှာလည်း .. မိန်းမတွေပါရတယ် … တပ်ထဲမှာ ယောကျာ်းဖြစ်သူပဲ တာဝန်ထမ်းနေတယ်ဆိုပေမယ့် တပ်ထဲလိုက်နေရတဲ့ … မိန်းမတွေမှာလည်း … ပူးတွဲတာဝန်တွေပါလာပါပြီ… အခုလို သင်္ကြန်နီးပြီဆိုလျှင် သင်္ကြန်ယိမ်းလိုမျိုးတွေလည်း လုပ်ကြသေးတယ် … ။ မိဘအိမ်ကိုလည်း ပြန်ချင်တိုင်းမပြန်ရဘူး .. တပ်ကခေါ်ခိုင်းလျှင် … မရှိတဲ့အခါ ငြိငြင်ခံရတတ်တယ်လေ … ။
အပေါ်က ကတော်ကို ဖားရ …. အောက်ကလူတွေကို ခိုင်းရနဲ့ .. ပြောရလျှင် … အနေကြပ်တဲ့နေရာမျိုးပါပဲ
မိန်းမတွေလဲမိဘအိမ်ပြန်ရင်ခွင့်တင်ရသေးတာ။ အများဆုံး ၃ လပဲပေးတယ်။ ဒါတောင်အခုချက်ချင်းပြန်ခဲ့ဆို အကြောင်းပြချက်မရှိပြန်ရတာ။ မလွယ်ပါဘူး။
ကျနော်တော့မထင်ပါ။ သဲနု နှင့် အိတုံတို့ ၏ လင်တော်မောင်များသည် စစ်သားများမဟုတ်သောကြောင့် ကျနော်မယုံပါ။
ကိုဖုန်းကျော်ရေ။ ရှင်ကရှင့်ပိုစ့်တွေမှာ ကျွန်မတို့ကို ရန်စလို့မရလို့ သူများပိုစ့်အထိ ၀င်ပြီးရန်စနေ တယ်ပေါ့လေ။ ကျွန်မ အကြံတခုပေးလိုက်မယ်။ မယုံဘူးမဟုတ်လား။ ဟုတ်မဟုတ်သိရအောင် ကျွန်မတို့လဲပိုသေချာသိသွားရအောင် ရှင်စစ်သားတစ်ယောက်လောက် ယူကြည့်လိုက်ပါလား။ အဲဒါဆို အားလုံးအတိအကျသိသွားရ တာပေါ့။ ကျွန်မတို့ကတော့သိလဲသိတယ်။ ယုံလဲယုံတာမို့ စမ်းမကြည့်တော့ပါဘူး။ မယုံတဲ့ရှင်ပဲ ခဏပြန်လာပြီးစမ်းကြည့်ပေါ့။
တောက် တပ်ထဲမဝင်ခဲ့မိတာမှားတာပဲ နမို့ဆို ဝါ့လည်း နောက်ထပ်ရနေပြီ
လွန်လေပြီးသောတပ်ချုပ်ကြီးလို အပိုဆု ၅ ဆုပါတဲ့ဟာဆိုဘယ့်နှယ်လုပ်မတုန်း မောင်ပေစိရဲ့။
ဟိုးအရင်ကအောက်အငယ်ပိုင်းတွေကြတော့ တပ်မှာမိန်းမကလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီး တပ်စည်းကမ်းနဲ့နေခဲ့တဲ့ တစ်မိသားစုလုံးတပ်ထဲမှာပဲဘ၀ကိုပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ မိသားစုမျက်နှာကို မထောက် စားဝတ်နေရေးအတွက် မစာနာတော့ ဘဲ ဒီလိုဖြစ်ရင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်မသင့်လျော်ပါသဖြင့်ဆိုပြီး အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခဲ့ကြတယ်။နိုင်ငံတော် လစာစားတဲ့သူတိုင်းဝန်ထမ်းပါ။ မျှတတဲ့တရားစီရင်မှုရှိရင်ကျေနပ်ပါပြီ။
ကိုဘုန်းကျော် … လူဆိုလျှင် စကားကို ဆင်ခြင်ပြော .. လူပီပီသသပြော …. ။
ရှင်ပြောတဲ့ လင်တော်မောင် အခုမရှိသေးဘူး … ကျွန်မက အခုထိ single အပျိုကြီး ပဲ ။ သေချာမှတ်ထား … မမှတ်မိလျှင် စာရွက်နဲ့ ဘောပင်လ်နဲ့ရေးမှတ်ထား ။ ဒါမှ မေ့တတ်လျှင် နှဖူးမှာ စာရေးပြီးမှတ်ထား ။
လင်တော်မောင် စစ်သားဖြစ်မှ စစ်တပ်အကြောင်း သိရမှာလား … အမျိုးတွေထဲ ပတ်သတ်သူရှိတာနဲ့ သိနိုင်တဲ့ ကိစ္စကို … ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေသိပ်တွေးမနေနဲ့ … ။ သေချာ ဂဃနဏတွေ သိချင်လျှင် ရှင့်ညီမဖြစ်ဖြစ် ၊ အစ်မဖြစ်ဖြစ်ကို ချက်ချင်း လက်ငင်း စစ်သားနဲ့ ပေးစားလိုက် …. ။ သူတို့ပြောပြလိမ့်မယ်။
သြော်မေ့လို့ … မေ့လို့ … ရှင့်အမေကိုမေးလည်း သိနိုင်တာပဲ … သူလည်း စစ်သားယူထားခဲ့ဖူးတာပဲ … ။ :mad:
ဟယ် ….. (ဝမ်းသာအားရဖြစ်သံ) အီးတုံးလေးက အာပျိုဂျီးတဲ့ ။
အစ်ကိုကြီးက ၀ါရင်းတုတ်နဲ့တွယ်လိမ့်မယ် …
အင်း … အသူရာ တစ်ယောက် တော့ ဆေးထိုးအပ် မကြောက်၊ ခွဲစိတ်ဓါးမကြောက် ပါလားနော့ …